Qabyaaladda: Cudurka Soomaalida Dulleeyay. W/Q:Khadar Faarax Siciid
Friday June, 22 2018 - 06:51:04
Wednesday March 22, 2017 - 15:12:01 in by Super Admin
Xanuunada somalida dhexdooda ku xididaystay qabyaaladda ayaa ka mid ah.
Waa xanuunka asaaggood hoos mariyay ee ay tallaabo la hollinkari la’yihiin. Rag iyo dumar, carrur iyo cirrole, mid cilmi leh iyo mid aan magaciisa qori karinba waslad qabyaaladeed khaanadaha qalbiga mid ka mid ah kaga qolaysan ayaa laga helayaa (tiro kooban oo Rabbigu ka nadiifiyay maahaane).
Xanuunkan xaqiiqadiisu marka laysku soo xooriyo, waxay isugu biyoshubataa ‘Hiil iyo hoo abwadaagnimo darteed laysu gu galo, tiyoo isirkaa cidda ka baxsanna colaad toos ah ama mid dadban lagu qaadayo, kaddibna xuquuqahooda wax ka mid ah ama wadar ahaantoodba la xalaalaysanyo’.
Waaqaca aynu la noollahay iyo wacaal sooyaaleedka umadahii idlaaday laga hayo, labaduba waxay
baraarujinayaan in xanuunkani yahay mid guun ah oo milay fog jiritaanka aadanaha lasoo rafiiqgalay. Hase ahaatee umadahaas idlaaday iyo bulshooyinka haatan joogaaba waxay ku kala tagsanyihiin/tagsaayeen, hadba heerka ay qabyaaladdu dhexdooda ka taagan tahay. Oo goor gaar ah, gobol gaaar ah, iyo/ama bulsho gaar ah dhexdeeda jiirada (slope) qabyaaladdu kok u kac ayay samaysaa, halka milay kale ama bulsho kale dhexdeedana ay jiiradeedu heer hoose marsan tahay. sida habsocodka xarriiqdan marmaroorta oo kale:
Baaxaadeggaa kor u kaceed iyo hoos u dhaceed ee qabyaalddu bushooyinka dhexdooda ka samaynaysaa ma aha kuwo iskood isu darawalinaya, balse waa kuwo salka ku haya sababayaal. Si kale haddaan u sheego, waxa jira dubbayaal qabyaaladda lagu daaduumiyo oo gaadhsiiya heer ay baaralays dareemayaasha oo dhan ka naafaysan noqoto. Taas liddigeedana, waxa kale oo jira, quud ay ku quawadaysto iyo harooyin isla jeerkay ka durduuratoba ay madheedh-dha is mariso oo ka toorayso.
Soyaal ahaan xanuunkani somaalida ilaa xilli durugsan ayuu noloshooda ku soo lifaaqnaa. Dawladnimadii ka hor, habnoloodkoodaba waxa uu ku taagnaa qabiilooyin xifaaltama oo xamaasad qabyaaldeed cirmar ahi u dhexayso. xasuuq iyo xoolo kala dhac joogto ah baa ka dhex aloosanaanjiray, sida tix iyo tiraabba la i noogu soo tebiyay. Nasiib darro se xilligii kala guurkii ee noloshaa hore ee qabiilladu gadhwadeenka ka ahaayeen iyo tan hadda ee dawlidnimadu is waydaaranayeen ayaa bulshada oo aan u bislayn haannaanka dawliga ah darteed, waxa si fudud isugu soohmay qabyaaladdii iyo nidaam dawladeedkii cusbaa ee loo soo digorogtay. Eedda ugu waynna waxa iska lahaa (aragtidayda) dadkii dawladdaa abuurantay jagooyinka sarsare ka qabtay ee jidkan ina-adeeraysiga ahee aynu ka bixi kari la’nahay inoo soo abqaalay. Iyaga ayaa abuuray maanhagga melmelan ee somalidu dawladnimada ka qabto. Qofka soomaliyeed Dawladnimada waxa uu u arkayaa sidii ceel miilaysi ah oo marba qofka dawliska u qabtaa ka faraqabsado, xigtadiisana xoox xoor leh uga liso.
Inta badan qofka qof madax ah fursad u hela la fadhiisigiisa waxa uu waydiiyaa lacag ama inuu xil la taxtaxo (shaqaalaysiiyo). Taas baana kuu caddaynaysa dawladnimada inaynu ka aaminsanahay sidii ‘timir xabaal taal’ oo kale. Waxa aynu u aragnaa wax aan layska la xisaabtamayn oo qofku sida uu doono ka fali karo, cidda uu doono shaqaalaysiinkaro, cidda uu doonona duudsiyi karo (teennu wayba tahaye). Dhabbahaasna ninmankii inoo dhagaxdhigay ee sidan aynu wax u aaminsanahay inoo aaminsiiyay ciddii ceebaysaa kuma cambaaraysna. Ceel boqol baac hoos u qodan ayay nagu shalwiyeen kuwaasi.
Madaxdii dawladahii hore iyo kuwan haatan jiraba majraha u qabtay waxa ay xaqiijin kari waayeen; caddaladdii iyo sinaantii gumarada (resource) dadka ka dhexaysa si siman loogu wadaagi lahaa. Waana caddaalad tirankaa halka ay sartu ka qudhunsantahay ee qabyaaladduna ay tamar-shidaaleedkeeda ugu badan ka qaadataa. Sabo aanay caddaaladi ka jirin, waxa waajib ka ah cuduro badan oo halis ahi inay ka dillaacaan. Xasiloonida iyo sareedooyinka kale ee ka jiraana inay suulayaan waa mid aan lugu muransanayn. Jaad kasta oo horumar ah caddaalad darradu iyada ayaa jilbaha dhulka u dhigta oo naafaysa, badhaadhe kasta oo soo bidhiiqayana iyada ayaa bakhtiisa oo naqaska ku joojisa ilaa intuu ka geeriyoonayo. Hadaba caddaaladdii markay mirood noqotay ee maamul hufan oo martigeliya soomaalidii ka dhexwayday ayaa cuduradii waayitaankeeda ka dhashay oo olkaynayaa bulshadii dhan kasta u gu baaheen. Qabyaaldduna cudurdaa caddaaladda waayitaankeeda ka dhasha ayay ka mid tahay.
Suntan qabyaalddu goorma, iyo sidee ayay qofka somaliyeed u saaqdaa?
Warcelin ahaan, waxaan odhan karaa ‘qofka soomaliyeed markuu waayay caddaalad laysku hallayn karo oo uu degelkiisa ku hoos hadhsado ayuu hareerihiisa dhugtay, baadigoobna u galay farsamadii uu kaga fakanlahaa xaalladdaa halista ah ee u nuglaysiinaysa in la dulmiyo (coping strategy). Baadigoobkiina wuxuu ku ogaaday in haddii ay dhacdo in la dulmiyo, cidda qudha ee si dhakhso ah, hagar la’aanna ah adyadaha loo gaysto uga jawaabi kartaa inay tahay tolkiisa oo kaleya. Waxa uu garawsaday haddii maalkiisa lagu tacaddiyo in tolkii faydandoono, una soo dhicin doono. Haddii milggihiisa lagu saqajaamona iyaga (tolka) oo gadoodsan ay ku dhiillaabi doonaan ‘Tola’ay ma anagoo reer X ah ayaa reer Y waddo iska marin kari waynay, …’ sidaana uu garab ku heli doono.
Xilliga haddii laga jawaabayona, qofka somaliyeed isaga oo aan qaangadhinba inuu qabyaaladda barto ayay u eegtahay. Inta uu xaaladda kuraynimada ku jiroba qofku waxa uu waalidkiis ama ehelediisa kaleba ka maqlaa ama ka arkaa iyagoo xin iyo xan qabyaaladeed gorfaynaya, ama siyaasad reeraysan iskula dardaarmaya, ‘sida inadeerkaa u codee, murashax hebel waa reer hebel, IWM’ kuraygii ama kurayaddiina wixii eheladu isku boorrinaysay ayaa si baraad la’aan ah ugu tallaalma.
Qabyaaladda xal ma loo heli karaa?
Xalka qabyaaladdu wuu adkaanaya inta dadku ka helayaan marmarsiinyo ay qabyaaladda ku sii haysan karaan. Run ahaan, xalkeedu waa uu carceersanyahay inta qofku tolkiisa uu u arkayo gidaarka keliya ee uu dulmiyada dadka kale kaga imanaya iskaga gaashaami karo. Xal wax-ku-ool ah marna ba loo helimaayo inta gumarada dalka cid gaari ahi siyaabo xaaraan ah darteed ugu bursanayso, cid kalena siyaabo xaraan ah darteed looga yuraynaayo .
Xal qabyaaladeed inaynu raadinaa waaba xaaraan inaga oo hagitaankii (sayaasaddii) dalkaba u haniyaynay oo uga hadhnay dad naxliga kobciya oo godob ku nool ah. U haniyayn keliyaba maahee u guulwadaynayna.
Haddii se la helo cid caddaalada xaqiijin karta, eexdana indhaha ka ridi karta, -muddaday doontoba ha qaadatee- markaa qabyaaladda waa laga gacansarrayn karilahaa. Bal adba suureeyoo ‘insaan ku kalsoon inuu jiro maamul xaquuqdiisa u ilaalinayaa qabyaalad muxuu ugu baahnaan lahaa? Waxba dheh dee!
W/Q:Khadar Faarax Siciid
Hargeisa:-"Anigu Suugaanta Soomaalida Kuma Qaybiyo 4.5"...Qoraa Idaajaa
War Deg Deg Ah Ethiopia Oo Laga Qaaday Xaaladdii Deg Degga ahaa, Gobolka Soomaalida Wali Wuusaaran yahay.
05/06/2018 - 22:13:34
Gudaha:-Suldaan Siciid Oo Si Adag Ugu Jawaabey Boqor Faysal Cismaan Baraag--Kana Hadlay Colada Celafweyn.
Caalamka:-"Liyuu Boliiska Soomaalida Itoobiya waa in la kala diraa"
Congo:-Cudurka Ebola Oo Mar Kale Ka Dillaacay Qaaradda Afrika
09/05/2018 - 09:37:14
Hargeisa:-Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay Iyo Soo Dhawayn Balaadhan Oo Lagu Qaabilay
03/05/2018 - 20:45:15